အချိန် တစ်ရက် ဒေါ်လာ တစ်သန်း (ဒီ POST လေးဖတ်ပြီး မနက်ဖြန် ကစပြီး ဘဝ မှာ ဘာတွေ အရေးကြီး လဲ မြင်နိုင်ကြပါစေ) – Alinyaung
အချိန် တစ်ရက် ဒေါ်လာ တစ်သန်း (ဒီ POST လေးဖတ်ပြီး မနက်ဖြန် ကစပြီး ဘဝ မှာ ဘာတွေ အရေးကြီး လဲ မြင်နိုင်ကြပါစေ)
March 8, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM knowledge 0
လူတစ်ယောက်ဟာ ငယ်စဉ် ကတဲက ပိုက်ဆံ ကို မစားရက် မသောက်ရက် စုဆောင်းတယ်။ အသက် ၄၀ ပြည့်တဲ့အခါ သူ့လက်ထဲမှာ ဒေါ်လာ တစ်သန်းစုမိနေပြီ။သူ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိတ်ပြီး ကြိုက်နေတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။ အမျိုးသမီး က လည်း သဘောတူလို့ မနက်ဖြန်မှာ လက်ထပ်ကြတော့မယ်။ တစ်သက်လုံး စုဆောင်းလာခဲ့တဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ သူ့ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာ နေသွားတော့မယ်ဆိုပြီး သူဟာ အရမ်း ပျော်နေတယ်။
အရမ်းပျော်ပြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့ ညနက်မှ အိပ်ပျော် သွားတယ်။ သူဟာ အိပ်နေရင်းကနေ လန့်နိူးလာတယ်။ အနက်ရောင် ၀တ်စုံ ရှည်ကြီးရုံထားပြီး ခေါင်မြီးခြုံထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သူအိပ်နေတဲ့ ကုတင် နားမှာ လာရပ်နေတာကို ပြတင်းပေါက်က ၀င်လာတဲ့ လရောင် အောက်မှာ သူတွေ့လိုက်ရတယ်။ အဲဒီလူဟာ ဓါးကောက်ကြီး တတ်ထားတဲ့ တုတ်ရှည်ကြီး ကိုင်ထားတယ်။ ခေါင်းမြီးခြုံအောက်မှာ ပေါ်နေတဲ့ သူ့ မျက်နှာ ဟာလည်း အရိုးခေါင်းခွံနဲ့ တူနေတယ်။
သူလည်း အရမ်းကြောက်သွားပြီး ရုတ်တရက် စကား မပြောနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ နောက်မှ သူက အရဲစွန့်ပြီး အဲဒီလူကို ‘ခင်ဗျား ဘယ်သူလဲ’ လို့ မေးလိုက်တယ်။ ဟိုလူက ‘ငါ သေမင်း ပဲကွ။ မင်း လူ့ပြည် မှာ နေတာ အချိန်စေ့သွားလို့ အခု လာခေါ်တာ။ လိုက်ခဲ့တော့’ ဆိုပြီး သူ့လက်ကို ဆွဲပါတော့တယ်။
သူလည်း မလိုက်ချင်လို့ အတင်း ရုန်းပေမယ့် သေမင်း က အားသန်လွန်းလို့ သူ့ဆွဲခေါ်ရာကို ပါနေတယ်။ သူဟာ ရုန်းလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သိလိုက်လို့ သေမင်း ကို ခုလို တောင်းပန်ပြောလိုက်တယ်။ “ကျွန်တော့်ကို လူ့လောကမှာ ၃ ရက် ဆက်နေဖို့ ခွင့်ပြုပါလား ခင်ဗျား။ ကျွန်တော် မနက်ဖြန် လက်ထပ် တော့မှာမို့ ကျွန်တော့် မိန်းမ နဲ့ ၃ ရက်လောက် အတူ နေပါရစေပါ။ ကျွန်တော်စုထားတဲ့ ဒေါ်လာ တစ်သန်းရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံကို ပေးပါမယ်”
သေမင်း က ခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီး သူ့လက်ကို ဆက်ဆွဲတယ်။ ဒီတော့ သူက ခုလို သေမင်း ကို ပြောလိုက်ပြန်တယ်။“၃ ရက်နေခွင့် မရရင်လည်း ၂ ရက်လောက်တော့ ခွင့်ပြုပါလားဗျာ။ အဲဒီအတွက် ဒေါ်လာ တစ်သန်း ရဲ့ တစ်ဝက်ကို ပေးပါမယ်။ လူ့ဘ၀ရဲ့ စည်းစိမ် ကို မသေခင် ခံစားသွားချင်လို့ပါ”
ဒါလည်း သေမင်း က ခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီး ဆက်ပြီး သူ့လက်ကို ဆွဲနေတယ်။ ဒီတော့ သူက ခုလို သေမင်း ကို ပြောလိုက်ပြန်တယ်။ နောက်ဆုံး သူဟာ သူ့ရဲ့ ဒေါ်လာ တစ်သန်း အားလုံးကို ပေးပါမယ်။ လူ့လောကမှာ တစ်ရက်လေးပဲ နေခွင့်ပေးပါတဲ့။ သေမင်းက မရဘူးလို့ အပြတ်ပြောလိုက်တယ်။
ဒီတော့ သူ သိလိုက်ပြီ။ သေမင်း ကို ဘယ်လိုမှ ဈေးဆစ်လို့ ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် သူက သေမင်း ကို စာလေးတစ်စောင်တော့ ရေးခဲ့ပါရစေလို့ ခွင့်တောင်းလိုက်တယ်။ ဒါကိုတော့ သေမင်း က ခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်။သူလည်း ကုတင်ဘေး က စားပွဲပေါ်က စာရွက် တစ်ရွက်ပေါ်မှာ စာကို ကမန်းကတန်း ရေးလိုက်တယ်။ သူရေးလိုက်တာက . . .
“မိတ်ဆွေတို့၊ လူ့လောကမှာ နေရတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးမှာ သင့် ဘ၀ ကို အကျိုးရှိအောင် လုပ်ပါ။ ကျွန်တော် တစ်ရက်လေးဆက်နေချင်လို့ ဒေါ်လာ တစ်သန်း ပေးတာတောင် နေခွင့်မရပါဘူး။ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်ကို ကြည့်ပြီး အချိန်ဆိုတာ ဘယ်လောက်အဖိုးတန်တယ်ဆိုတာကို မိတ်ဆွေတို့ သိလောက်ပါပြီ”
အင်တာနက်မှာ ရှာတွေ့တဲ့ ပုံပြင်လေးပါ။
အခြိနျ တဈရကျ ဒျေါလာ တဈသနျး (ဒီ POST လေးဖတျပွီး မနကျဖွနျ ကစပွီး ဘဝ မှာ ဘာတှေ အရေးကွီး လဲ မွငျနိုငျကွပါစေ)
လူတဈယောကျဟာ ငယျစဉျ ကတဲက ပိုကျဆံ ကို မစားရကျ မသောကျရကျ စုဆောငျးတယျ။ အသကျ ၄၀ ပွညျ့တဲ့အခါ သူ့လကျထဲမှာ ဒျေါလာ တဈသနျးစုမိနပွေီ။သူ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွိတျပွီး ကွိုကျနတေဲ့ အမြိုးသမီး တဈယောကျကို လကျထပျခှငျ့တောငျးလိုကျတယျ။ အမြိုးသမီး က လညျး သဘောတူလို့ မနကျဖွနျမှာ လကျထပျကွတော့မယျ။ တဈသကျလုံး စုဆောငျးလာခဲ့တဲ့ ပိုကျဆံ နဲ့ သူ့ဘဝကို ပြျောရှငျစှာ နသှေားတော့မယျဆိုပွီး သူဟာ အရမျး ပြျောနတေယျ။
အရမျးပြျောပွီး စိတျလှုပျရှားနလေို့ ညနကျမှ အိပျပြျော သှားတယျ။ သူဟာ အိပျနရေငျးကနေ လနျ့နိူးလာတယျ။ အနကျရောငျ ၀တျစုံ ရှညျကွီးရုံထားပွီး ခေါငျမွီးခွုံထားတဲ့ လူတဈယောကျဟာ သူအိပျနတေဲ့ ကုတငျ နားမှာ လာရပျနတောကို ပွတငျးပေါကျက ၀ငျလာတဲ့ လရောငျ အောကျမှာ သူတှလေို့ကျရတယျ။ အဲဒီလူဟာ ဓါးကောကျကွီး တတျထားတဲ့ တုတျရှညျကွီး ကိုငျထားတယျ။ ခေါငျးမွီးခွုံအောကျမှာ ပျေါနတေဲ့ သူ့ မကျြနှာ ဟာလညျး အရိုးခေါငျးခှံနဲ့ တူနတေယျ။
သူလညျး အရမျးကွောကျသှားပွီး ရုတျတရကျ စကား မပွောနျိုငျဖွဈနတေယျ။ နောကျမှ သူက အရဲစှနျ့ပွီး အဲဒီလူကို ‘ခငျဗြား ဘယျသူလဲ’ လို့ မေးလိုကျတယျ။ ဟိုလူက ‘ငါ သမေငျး ပဲကှ။ မငျး လူ့ပွညျ မှာ နတော အခြိနျစသှေ့ားလို့ အခု လာချေါတာ။ လိုကျခဲ့တော့’ ဆိုပွီး သူ့လကျကို ဆှဲပါတော့တယျ။
သူလညျး မလိုကျခငျြလို့ အတငျး ရုနျးပမေယျ့ သမေငျး က အားသနျလှနျးလို့ သူ့ဆှဲချေါရာကို ပါနတေယျ။ သူဟာ ရုနျးလို့ ရမှာမဟုတျဘူးဆိုတာကို သိလိုကျလို့ သမေငျး ကို ခုလို တောငျးပနျပွောလိုကျတယျ။ “ကြှနျတေျာ့ကို လူ့လောကမှာ ၃ ရကျ ဆကျနဖေို့ ခှငျ့ပွုပါလား ခငျဗြား။ ကြှနျတျော မနကျဖွနျ လကျထပျ တော့မှာမို့ ကြှနျတေျာ့ မိနျးမ နဲ့ ၃ ရကျလောကျ အတူ နပေါရစပေါ။ ကြှနျတျောစုထားတဲ့ ဒျေါလာ တဈသနျးရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံကို ပေးပါမယျ”
သမေငျး က ခှငျ့မပွုဘူးဆိုပွီး သူ့လကျကို ဆကျဆှဲတယျ။ ဒီတော့ သူက ခုလို သမေငျး ကို ပွောလိုကျပွနျတယျ။“၃ ရကျနခှေငျ့ မရရငျလညျး ၂ ရကျလောကျတော့ ခှငျ့ပွုပါလားဗြာ။ အဲဒီအတှကျ ဒျေါလာ တဈသနျး ရဲ့ တဈဝကျကို ပေးပါမယျ။ လူ့ဘဝရဲ့ စညျးစိမျ ကို မသခေငျ ခံစားသှားခငျြလို့ပါ”
ဒါလညျး သမေငျး က ခှငျ့မပွုဘူးဆိုပွီး ဆကျပွီး သူ့လကျကို ဆှဲနတေယျ။ ဒီတော့ သူက ခုလို သမေငျး ကို ပွောလိုကျပွနျတယျ။ နောကျဆုံး သူဟာ သူ့ရဲ့ ဒျေါလာ တဈသနျး အားလုံးကို ပေးပါမယျ။ လူ့လောကမှာ တဈရကျလေးပဲ နခှေငျ့ပေးပါတဲ့။ သမေငျးက မရဘူးလို့ အပွတျပွောလိုကျတယျ။
ဒီတော့ သူ သိလိုကျပွီ။ သမေငျး ကို ဘယျလိုမှ စြေးဆဈလို့ ရမှာ မဟုတျတော့ဘူး။ ဒါကွောငျ့ သူက သမေငျး ကို စာလေးတဈစောငျတော့ ရေးခဲ့ပါရစလေို့ ခှငျ့တောငျးလိုကျတယျ။ ဒါကိုတော့ သမေငျး က ခှငျ့ပွုပေးလိုကျတယျ။သူလညျး ကုတငျဘေး က စားပှဲပျေါက စာရှကျ တဈရှကျပျေါမှာ စာကို ကမနျးကတနျး ရေးလိုကျတယျ။ သူရေးလိုကျတာက . . .
“မိတျဆှတေို့၊ လူ့လောကမှာ နရေတဲ့ အခိုကျအတနျ့လေးမှာ သငျ့ ဘဝ ကို အကြိုးရှိအောငျ လုပျပါ။ ကြှနျတျော တဈရကျလေးဆကျနခေငျြလို့ ဒျေါလာ တဈသနျး ပေးတာတောငျ နခှေငျ့မရပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့အဖွဈအပကျြကို ကွညျ့ပွီး အခြိနျဆိုတာ ဘယျလောကျအဖိုးတနျတယျဆိုတာကို မိတျဆှတေို့ သိလောကျပါပွီ”
အငျတာနကျမှာ ရှာတှတေဲ့ ပုံပွငျလေးပါ။
ရင်ထဲမှာနင့်သွားတာပဲ တရားရစရာကောင်းလိုက်တာ ဖတ်ကြည့်နော်း)